Iindaba-Ukugcinwa kwesihluzo seNgxowa kunye nokuSebenza
Umjikelo wokucoca kunye nexesha lokucoca ulusu olususa uthuli zizinto ezibalulekileyo ekusebenzeni kokubambisa kunye neemeko zokusebenza.
Umjikelo wokucoca, ixesha lokucoca kunye neendlela zokucoca ezithathiweyo kunye nohlobo lwento ozojongana nayo kunye nezinye izinto, kufuneka ibe ziipropathi zothuli, uxinizelelo lothuli, njl.njl. Nasemva koviwo oluyimfuneko ukumisela.
Ukucoca umjikelo kunye nexesha lokucoca ukumisela umthetho-siseko, ngokweendlela ezahlukeneyo zokucoca kusetyenziswa iisetingi zokucoca ezahlukeneyo, into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele kukuhlala kwingxowa yokuhluza kuludwe olulandelayo lokubambelela, ukuze kuqinisekiswe elona xesha lincinci lokucoca elisebenzayo, Misela umjikelo wokucoca. Yenza umjikelo wokucoca ixesha elide kangangoko kunokwenzeka, ixesha lokucoca lifutshane, ukuze libaleke phantsi kwemeko yokuxhathisa izixhobo zokususa uthuli kwezoqoqosho.
Ukucoca umva wohlobo lwe-ash-style:
Ukuba ixesha lokucoca lifutshane kakhulu, uthuli olukwikhwama lokucoca alukhange lususwe ngokupheleleyo ukuba lusebenze, luya kubuyisela ngokukhawuleza ukunganyangeki kwaye ngokuthe ngcembe lenyuke. Kwelinye icala, ukuba ixesha lokucoca lide kakhulu, isantya sokucoca siza kunyuka ngenxa yokucoca ngaphezulu, kwaye uthuli lunokungena kwilaphu lokucoca ulwelo ukuze ibhegi yesihluzi ivalwe kwaye yaphuke.
Indlela yokucoca ukungcangcazela:
Kwaye ukucoca umoya kuhlobo olufanayo lokucoca, ngelixa indawo yokuqhuba yokungaphumeleli sesinye sezizathu.
Ukuba ixesha lokucoca lifutshane kakhulu, ngenxa yokucoceka okuthe gqolo, ukucoca rhoqo, okukhokelela kuthuli kunokungena ngaphakathi kwilaphu lokucoca okubangelwe zizizathu zokuphuma kunye nokwahlukana. Ngokuchasene noko, ixesha lokucoca lide kakhulu, emva koko ukuqokelelwa kwengxowa yokuhluza uthuli kuya kuyenza ifowuni ekusebenzeni okuphezulu kwe-impedance.Cleaning cycle kunye nokucoca ixesha lokuchasana nefuthe.
Icebo lokucoca ulwelo ngexesha lokusebenza, kufuneka sihlale sigcina inkqubo yoxinzelelo lokwahlulahlula, ukuze siqonde ukuba kukho ingxaki na. Kuya kufuneka kubhalwe kwangaphambi kwexesha xa ixabiso loxinzelelo lokusebenza okuqhelekileyo, njengokufumanisa ukuba umahluko woxinzelelo uyonyuka, oko kunokuthetha ukuba ingxowa yokuhluza iyavaleka, iqhina lebhodi yothuli, ukusilela kwamaziko okucoca, ibhakethi lothuthu liyadlala kakhulu njalo njalo. Ukwehla koxinzelelo, okunokuthetha ukuba ibhegi ibonakala yonakele, icinyiwe, icala elingenayo lokuvalwa kombhobho okanye ivelufa ivaliwe, kukho ukuvuza phakathi kwekhabinethi okanye kwigumbi elingaphantsi kwegumbi.
Kuba zonke izihluzi zineempawu kunye neeparameter, xa sikhetha izinto zokucoca ulwelo kwiingxowa zokucoca uthuli, kufuneka sazi ezi paramitha zilandelayo: iqondo lobushushu, ukufuma, uthuli ubukhulu, iipropathi zeekhemikhali zerhasi, uthuli olurhabaxa, iiparameter zoomatshini bokucoca ulwelo.
Ukucoca ulwelo, uthuli oluluncedo, amacebo okucoca iqondo lobushushu eliphezulu.
Umatshini wengxowa ye-RIQI yokuhluza ikunika isisombululo esifanelekileyo ngokweempawu zothuli, ikuncede ukhethe izinto ezilungileyo zokucoca ukufezekisa ukuhluza okusebenzayo.